Posted by ကို Tranquillus | ဇွန်လ 4, 2018 | လူ့ဆက်ဆံရေး
သင်၏စားပွဲပေါ်မှာစုပြုံကြောင်းဖိုင်များ, သင့်ရဲ့သူဌေးသို့မဟုတ်နည်းနည်းနားလည်မှု အကောင်းတစ်ဦးသဘောထားကချမှတ်ရန်မထင်ထားဘူးသူတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်.
အဲဒီအစားကျနော်တို့ relativize နှင့်ဤအခိုက်အသာယာယီဖြစ်ပြီးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းအရာအားလုံးပိုကောင်းပါလိမ့်မည်ကြောင်းကိုပြောပါရှိရပါမည်။
ကွောကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားရန်, ငါတို့ပိုင်းခြားသိမြင်မဟုတ်ဆုံးရှုံးရစေသည်နှင့် သင့်လျော်စွာကိုတုံ့ပြန် ကစိတ်ဆိုးအခါ။
အကယ်. အစားသငျသညျ ပွင့်လင်းအာကာသအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်, နားကြပ်များအတွက်မျိုး။
အဆိုပါဂီတဂီတလျှော့ပေါ့ရွေးချယ်ဖို့သင်တန်းပေးမဟုတ်ဘဲအလျင်အမြန်ဖြေလျှော့ခြင်းနှင့် unwind မှကူညီပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ အဲဒါကို လုံလောက်အောင် မစဉ်းစားထားပေမယ့် တေးဂီတသံတချို့က ရုန်းထွက်လိုက်တာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အံ့ဩစရာ ဖြစ်စေပါတယ်။
အခြေအနေကိုသင်သည် annoys အခါ, သငျသညျ overworked ပါတယ်, သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏အီးမေးလ်ဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုမသိရပါဘူး, ရှိသမျှ applications များ, အားလုံးအရေးပေါ်အခြေအနေ: အပြုသဘောနေဖို့နဲ့အခြေအနေကတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်မည်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးနေတာပါလား? မကြာခဏအရေးတကြီးတဦးတည်းမဟုတ်ပါ!
သူမသည်ကြောင့်လည်း adrenaline ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ခံစားချက်တိုးပွါး, နိုးသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှငျ့သငျ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်စိတ်လှုပ်ရှားရမဟုတျလော စက်တင်ဘာလ 15th, 2018Tranquillus
လုပ်ငန်းခွင်မှာသင့်ရဲ့ Interpersonal ဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်